Sanganasa amidy amin'ny ||
Essays amidy amin'ny ||
Mila fanampiana amin'ny fanoratana matihanina? Makà taratasy avo lenta avy amin'ny Essays for For sale tsara indrindra amin'ny || voasoratra amin'ny fenitra akademika rehetra.
Ahoana ny fomba hanoratanao lahatsoratra amidy tsara
Raha efa nanandrana nivarotra ny lahatsoratra nataonao an-tserasera ianao, dia fantatrao fa ny fivarotana sanganasa hahazoana vola dia asa sarotra. Tsy maintsy mamorona fifandraisana tsara amin'ireo mpividy ianao mba hivarotra ny sanganasa mety. Saingy tsy mila sarotra izany. Amin'ny alàlan'ny fitaovana sy fahalalana mety, azonao atao ny manangana fifandraisana an-tserasera akaiky amin'ireo mpanjifanao mba tsy hivadika aminao izy ireo ary hanohy mividy ny sanganasao mandritra ny taona maro. Andao hojerentsika ny fomba sasany hanatanterahana izany.
Mba hivarotana maimaimpoana ny dianao, mila mahatsapa ny mpanjifanao fa manome serivisy ahazoan'izy ireo tombony. Ny fomba iray hanatanterahana izany dia amin'ny fanomezana azy ireo santionany amin'ny asanao. Ny ankamaroan'ny olona manoratra sanganasa ho fivelomana dia hanome anao santionany santionany iray na roa hisafidianan'izy ireo. Tsy tokony ho sarotra loatra ilay lahatsoratra, ary tokony hohafanaina tsara koa. Rehefa manome azy ireo santionany santionany ianao dia asehonao azy ireo fa tsy vitan'ny hoe mahay manoratra lahatsoratra misy teny tsara ianao, fa miahy ny kalitaony koa.
Raha vantany vao azonao ny santionanao, dia mila mandany fotoana hikarohana ny tsena ianao. Ny tsara indrindra dia ny mahita karazana essai samihafa izay amidy an-tserasera ankehitriny. Ohatra, misy ny sanganasa akademika, ny dissertations, ny sanganasan'ny tena manokana, sns. Te-hikendry tsena maro isan-karazany ianao mba hampitombo ny fahafahanao mahazo tolotra.
Raha vantany vao nangoninao ny santionanao, dia mila manana anarana tsara ianao amin'ny serivisinao. Azonao atao ny mampiasa ny anaranao manokana na mampiasa marika marika tianao. Tsarovy fa rehefa mivarotra lahatsoratra iray ianao dia tsy maintsy ataonao ho toy ny hoe manana zavatra atolotra ny mpamaky ianao. Mila manana anarana manintona ianao izay hampiditra ny mpanjifanao amin'ny serivisinao. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fanoharana mahaliana, mitantara tantara mahatsikaiky, amin'ny fampiasana ohatra mahafatifaty, na amin'ny alàlan'ny fananganana zavatra mahafinaritra fotsiny.
Raha vantany vao manana anarana ho an'ny serivisinao ianao dia mila mamantatra ny fomba kasainao hivarotana ny lahatsoratrao. Azonao atao ny mandefa izany amin'ny tranokala toa an'i Elance na afaka manangana kaonty PayPal ianao hamindra vola any amin'ny bankinao. Safidy iray hafa ny manangana bilaogy ary manao dokambarotra amin'ny tranokalanao. Ireo safidy roa ireo dia hahazo fifamoivoizana amin'ny tranokalanao izay handika ny varotra. Alao antoka fotsiny fa mazava ny zavatra ataonao ary mazava ny toerana misy ny dokam-barotrao.
Raha vantany vao manana anarana ho an'ny orinasanao ianao ary manana tranokala iray, dia tokony hampiditra ny mpanjifanao eo am-baravarana ianao. Ny tsara indrindra dia ny fivarotana ny sanganasao mivantana avy amin'ny solosainao, fa raha tsy azo atao izany dia afaka manangana pejy famintinana fotsiny ao amin'ny tranonkalanao ianao. Ity dia pejy fampidirana fohy izay hahatonga ny mpitsidika anao hisoratra anarana ao amin'ny mailakao. Izy io koa dia hampiditra azy ireo ao amin'ny lisitry ny mailakao ka handefasanao azy ireo amin'ny ho avy. Manoro hevitra aho ny hanao ity pejy ity ho manintona sy maro loko mba hiavaka amin'ny mpifaninana rehetra aminao.
Tonga izao ny ampahany amin'ny fivarotana ny sangananao. Misy fomba roa samihafa hanatanterahana an'io. Ny iray dia amin'ny alàlan'ny orinasa 'varotra mivantana'. Ireo orinasa ireo dia hividy ny asanao manontolo ary hizara izany eo amin'ireo mpanjifanao afa-po. Ny fomba hafa dia amin'ny alàlan'ny tranokala lavanty. Azonao atao ny mivarotra lahatsoratra iray isaky ny mandeha, tsy mandoa afa-tsy ny paositra amin'ilay kopia ilainao, na afaka mivarotra ny tahirinao manontolo.
Na izany na tsy izany dia mila manomboka manangana haingana ny fanangonana anao ianao. Rehefa manomboka mivarotra ianao dia tsy ho afaka hanaiky mpanjifa vaovao intsony. Mba hitohizan'ny fandehan-javatra dia alao antoka fa manoratra lahatsoratra mampahalala momba ny talenta fanoratanao ianao. Amin'ny fanaovanao izany dia hampiorina ny fahatokisanao anao ianao ary hanomboka hatoky anao ny olona, ​​toy ny ataon'izy ireo amin'ny zokinao lahy.